Malunga nathi -Xinle Xinyue Plastic Co., Ltd ..
Imbuyekezo Xinle Xinyue Plastic Co., Ltd. ibekwe Dugu, Xinle komzi, Shijiazhuang, Hebei kwiphondo China. Kuphakathi kweZiko lePlastiki ezimbini (iDingzhou kunye neXinle), zimalunga neekhilomitha ezili-10 ukusuka kuHola wendlela we-107, kwaye ubume bejografi buphezulu kwaye ukugcwala kwabantu kulula kakhulu.
Inkampani yethu inxaxheba kwimveliso PVC iimveliso zeplastiki ukususela kwiminyaka yoo-1980 kwaye yagqitywa kumgangatho wemveliso yesikhumba kunye nofakelo ngo-2008. Ngoku sinabasebenzi abangaphezu kwama-200, ikakhulu ukuveliswa kwesikhumba somgangatho ophezulu ophakathi nendawo ophantsi, imoto isikhumba somgangatho, i-non-slip doormat sponge flooring njalo njalo, kwaye sinobubanzi obubanzi kwilizwe lonke kwiimveliso ezi-2.5-4 zeemitha ukwanelisa intengiso yasekhaya nakwamanye amazwe.
Inkampani ukusukela oko yasekwa, ixhomekeke kumgangatho ukuze iphile isidima ukuze iphuhlise. I-Whit-state-of-the -art technology kunye nezixhobo, inkampani ikwindawo yesiseko seplastiki, ngaxeshanye, isebenzisa izinto zokwenza izinto ezigqwesileyo, kudityaniswe netekhnoloji yemveliso egqwesileyo imveliso yethu yomgangatho kunye nesikhumba, ilaphu elilukiweyo elingalukwanga, ukutyibilika kwesiponji, i-pvc ecocekileyo kunye ne-flooring yorhwebo ethengiselwa izixeko ezikhulu zasekhaya nakwamanye amazwe afana ne-Mid-Asia, South mpuma Asia, Mzantsi Afrika kunye neMpuma Yurophu njalo njalo. Umgangatho ophezulu wemveliso kunye nokuhle emva kweenkonzo zentengiso kufezekisile igama elihle kunye nelizwi-lenyanga.
Umgca wemveliso ye-4m, sakha umgca weemveliso oziimitha ezi-4 ububanzi ngo-2012, lo yayingumgca wokuqala wemveliso kwiimitha ezi-4, wafaka indawo engenanto yaseThailand yentsimi ngelo xesha, nakwiminyaka esi-8 edlulileyo, saqokelela isityebi amava ekuveliseni ngophando lwethu kunye nophando ngokungapheliyo. safumana ii-odolo ezininzi kwihlabathi kunye nabathengi basekhaya. I-flooring yomelele kakhulu kwaye intle ngombala wayo okhethekileyo kunye neempawu zayo. Enkosi kakhulu ngoncedo lwabahlobo bethu bakudala kwaye siyathemba ukuba abahlobo bethu abatsha bayayihoya le flooring yethu.
PVC Ikhaphethi, Umgangatho wekhaphethi, PVC Sponge nokwadala, Umgangatho wesiponji, Umgangatho, Ukuziva ukuxhasa isilwanyana kwiPet,